IOS 10 Meseji: Mashandisiro Ekushandisa Bubbles uye Mhuka dzeMukati | IPhone nhau
Sezvatave tambotaura pazviitiko zvakasiyana, chimwe chezvinhu zvakajairika zveiyo iOS 10 iri mukuvandudzwa, kwegore rechipiri rakateedzana, app Mirayiridzo. Iko kunyorera kwakaiswa nekutadza, iyo inonziwo iMessage, yasvika nayo tsigiro yezvinamirwa, Dhijitari Kubata uye a yakasarudzika nzira yekutumira matema kana mameseji atinogona kusarudza, pakati pezvimwe zvinhu, simba ratino tumira aya mabhuru.
Tinogona kutumira matema nenzira dzakasiyana, sekushandisa inki isingaonekwe iyo yatichafanira kubvisa nemunwe kuti tione zvakavigwa pasi kana kutumira simba izvo zvicharatidza manzwiro atinoita patinotumira iwo meseji. Semuenzaniso, chimwe chinhu chataigona kuona mune yakakosha mavakaratidza iOS 10 yaive meseji yekukumbira ruregerero (ndine hurombo) yakatumirwa mukati mebvu rakauya rakapfava. Isu tinotsanangura maitiro kuzviita pazasi.
1 Maitiro ekutumira matema nenzira yakakosha muIOS 10 Meseji
2 Maitiro ekutumira mameseji ane hupenyu hwakasiyana mumameseji muIOS 10
Maitiro ekutumira matema nenzira yakakosha muIOS 10 Meseji
Ichokwadi ndechekuti yakapusa asi, sezvazviri mune zvese, iwe unofanirwa kuongorora kana kuziva nzira. Tichazviita nekutevera matanho aya:
Zvine musoro, nhanho yekutanga kuvhura kana kuwana chat nemumwe wevatinosangana navo kana mapoka.
Tatova mukati mehurukuro, tinonyora meseji.
Zvino, panzvimbo yekubata museve kutumira meseji, isu tichafanirwa kuita imwe yesarudzo mbiri dzinotevera:
Kana mudziyo wedu uine 3D Kubata chidzitiro, tinodzvanya zvishoma kuomarara (Peek chiratidzo) pane museve wekutumira kuitira kuti sarudzo dzioneke.
Kana mudziyo wedu usina 3D Touch skrini, zvese zvatinofanirwa kuita kudzvanya uye kubatisisa museve wekutumira kuti sarudzo dzionekwe. Kana sarudzo dzikasaoneka mune ino yechipiri kesi uye kunyangwe zvichishungurudza, ndakaverenga akawanda kesi achigunun'una kuti havagone kuwana iwo. Iyo iguru yakapararira iyo Apple ichafanirwa kugadzirisa (kana isati yatomboita zvakadaro nekusunungurwa kweIOS 10.0.2). Inogona zvakare kuve mhinduro yekuremadza iyo "Deredza kufamba" basa kubva kuiyo iPhone kana iPad marongero.
Takatopinza sarudzo uye pakati pavo tinogona kuona:
Smoothness (iyi ndiyo yavaimbokumbira ruregerero muKeynote)
Iye zvino tinobata pane imwe yemapoinzi padhuze nesarudzo yega yega.
Chekupedzisira, tinobata museve unenge waonekwa pamusoro pechinhu padanho rekutanga.
Maitiro ekutumira mameseji ane hupenyu hwakasiyana mumameseji muIOS 10
Maitiro ekutumira iwo mameseji ane hupenyu hwemashure anogovera nhanho 1 kusvika ku4 yepfungwa yapfuura. Padanho rechina, pachinzvimbo chekusarudza matumire atichaita, isu chatinofanirwa kuita kutarisa kumusoro kwechiso uye Sarudza iyo tebhu «kumashure».
Ukatarisa pazasi pescreen unogona kuona kuti pane mapoinzi akati wandei seaya anoratidza kuti kune "mapeji" akati wandei. Chinhu chega chatinofanira kuita kusarudza imwe homwe kana imwe ndeye Rova zvakasimba kuruboshwe kana kurudyi. Kana tangoona iyo inotifadza, isu tinotumira meseji nekukanda pamuseve wekutumira. Nyore here?
Iye zvino unogona kutumira mameseji nenzira yakakosha muIOS 10. Ndazvitaura pazviitiko zvakasiyana, asi ndinozvida chaizvo uye ndinosuwa kukwanisa kuzvishandisa nevamwe vakawanda vandinosangana navo. Uye newe?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » IOS 10 Meseji: Mashandisiro Ekushandisa Bubbles uye Hupenyu Hwakapfuura
Mhoroi, zvakadii nezveArgentina, ini ndine iPhone 6 uye neruzhinji beta 10.1.0 uye nesarudzo meseji, ini handina nzira yekutumira mafoto
Mhoro izvi ndezve chete patinotaura kune mumwe munhu ane imwe idevice handiti? Nemafoni eApple, hapana izvi zvinoshanda, handiti?
Kwete, ine Android haishande, uye zvinosuwisa kuti Apple haiburitse iyi application kune mamwe madhivhisi. Kana mumwe wacho aine iPhone kana iPad, zita ravo rinowanikwa riri rebhuruu, uye hwindo racho rinoti "iMessage." Kana iri girini kana kuti "Meseji meseji" ikaonekwa, inotumira SMS kana MMS kana pikicha yakatumirwa, iyo inenge iine mutengo zvichienderana neanoshanda.
Zvakanaka ndatenda. zvinonyadzisa
Pindura kuna mauro
Yakabuda pamusoro wenyaya, asi chii chinoitika kana ukarova ndiro yekumba kaviri usina kuitsimbirira? pane angu matanhatu ma icon anodzikiswa.
iOS 10 yakandikurudzira kubhadhara iCloud